MAROLOANA SOAVINA - MIHOROHORO NY MPONINA : Mandrahona an-taratasy ireo dahalo fa hanafika
Mihorohoro tanteraka ny mponina ao an-tanànan’i Marolaona, Kaominina Soavina ao anatin’ny Distrikan’i Betafo iny. 12 janvier 2017
Manao izay danin’ny kibony ireo dahalo, tsy misy tahotra intsony fa na amin’ny andro antoandro mazava be izao aza dia manao fandrobana ry zalahy. Tsy vitan’izay fa mahavita manaparitaka taratasy eran’ny tanàna, sy mandefa hafatra mialoha ihany koa izy ireo izay milaza fa ho tonga hanafika ny tanàna.
Ny talata lasa teo raiki-tahotra ny mponina tao an-tanàna, efa nilaza mialoha mantsy ireo dahalo fa ho avy hanafika sy handravarava ao an-toerana. Nambaran’ireo mponina fa rehefa mandefa hafatra mialoha tahaka izao ireo olon-dratsy dia tena tonga tokoa. Tsy misy azon’izy ireo hatao afa tsy ny mihainohaino izay hafitsok’ireo malaso. Fantatra fa tsy sahy mampilaza ny mpitandro filaminana ireo mponina noho ny tahotra amin’ny mety hisian’ny valifaty mahery vaika hataon’ireo olon-dratsy.
Tsy afa-bela amin’ny asan-dahalo ny Distrikan’i Betafo iny, mirongatra izay tsy izy ny halatr’omby arahin’ny vono olona amin’ny fomba feno habibiana. Manao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa anefa ny mpitandro filaminana ankilan’izay saingy maro an’isa ireo dahalo.
Tsy ampy fitaovana ihany koa ireo mpitandro filaminana ary ny tena olana goavana dia mahery vaika noho ny fitaovam-piadiana ampiasan’izy ireo no eny an-tanànan’ireo malaso ka isany mampanano sarotra ny fanarahan-dia izany.
MAROLOANA SOAVINA - MIHOROHORO NY MPONINA
2017-01-12 15:18:46 par mehdi mountather
Ce séisme a Madagascar avertissement d’ALLAH aux gouvernement et peuple du Madagascar de se convertir a l’islam aujourd’hui urgent pour éviter la mort par ces punitions d’ALLAH un séisme plus 6 tsunami les inondations les foudres les tornades météorite astéroïde volcan typhon et les virus merci.
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (584) 15 mars 2018 Noroahina hivoaka ny lapa ny mpanao gazety, raikitra ny ady saritaka FANDINIHANA LALAM-PIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA (372) 14 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (347) 15 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (264) 15 mars 2018 Miparitaka ao Toamasina, lasa fitaovam-panaparam-pahefana KARATRA « ASSISTANT PARLEMENTAIRE » (175) 19 mars 2018 Saron’ny zandary ireo jiolahy nahavanon-doza FANAFIHANA MAHERY VAIKA TENY ITAOSY (171) 19 mars 2018